को बन्ला बेलायतको प्रधानमन्त्री?
को बन्ला बेलायतको प्रधानमन्त्री? - Nepal Talk
जेष्ठ २८ गते, २०७६ मा प्रकाशित
एजेन्सी । बेलायतको सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको प्रमुख बन्न १० जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। संसदमा बहुमत रहेको कन्जरभेटिभ पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति बेलायतको भावी प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। गत ७ जुनमा बर्तमान प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ नेतृत्वका लागि १० जनाको मनोनयन दर्ता भएको हो।
मे अहिले कार्य बाहक प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेकी छन्। नेतृत्वको मैदानमा रहेका १० जनाका नाममा मतदानमा लगिने छ। त्यस पछि सबै भन्दा धेरै भोट प्राप्त गर्ने २ जनाबीच पुनः प्रतिस्पर्धा गरिने छ। भावी प्रधानमन्त्रीलाई सबै भन्दा ठूलो चुनौति ब्रेक्जिटबारे संसदमा लामो समयदेखि अड्किएको प्रस्तावको छिनोफानो हुनेछ।
ब्रेक्जिटकै विषयले प्रधानमन्त्री मेले राजीनामा दिएकी हुन्। त्यस अघि पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्याम्रुनले पनि ब्रेक्जिट प्रस्तावकै कारण राजीनामा दिएका थिए। क्यामरुन बेलायत ईयुबाट बाहिरन नहुने पक्षमा थिए।